ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ အတႈသိဥတႈသီစီဆွံ (၂) ဘ့ဥတဘ့ဥ တႈပနီဥစီဆွံသ့ဥတဖဥအဂ့ႈ-တႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးတႈပနီဥစီဆွံအဂ့ႈ | Radio Veritas Asia
ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ အတႈသိဥတႈသီစီဆွံ (၂) ဘ့ဥတဘ့ဥ တႈပနီဥစီဆွံသ့ဥတဖဥအဂ့ႈ-တႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးတႈပနီဥစီဆွံအဂ့ႈ
ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံ အတႈသိဥတႈသီစီဆွံ (၂) ဘ့ဥတဘ့ဥ တႈပနီဥစီဆွံသ့ဥတဖဥအဂ့ႈ
၆၃. တႈပ်ႈကြံဏ တႈဒဲးဘးတႈပနီဥစီဆွံန႔ဥ မ့ႈတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?
တႈပ်ႈကြံဏ တႈဒဲးဘးတႈပနီဥစီဆွံန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥယ တႈဒိးန႔ႈတႈသ့စီ တႈပနီဥစီဆွံ၀ံၚအလီႈခံ တႈဒဲးဘးလ႕ အကစႈဒဥ၀ဲမၚ၀ဲတဖဥယ ဘဥတႈပ်ႈကြံဏခီဖ်ိလ႕ ပွၚလုႈတႈအဒိဥသီခါတဖဥန႔ဥလီၚ.
၆၄. ကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏဒုးကဲထီဥဒုးအိဥထီဥတ့ႈတႈပ်ႈကြံဏ တႈဒဲးဘးတႈပနီဥစီဆွံဖဲလဲဥအခါန႔ဥလဲဥ?
ဖဲကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏ ဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚအံဥစတ႕ဥအမုႈအိဥဘွံးနံၚ၀ံၚခီဖ်ိတ႕ အစံးဘဥတဲဘဥတ့ႈ အတႈမ႕ဖိတဖဥလ႕ယ ' ဒိးန႔ဥသးစီဆွံတက့ႈယ ဖဲဒဥပွၚအတႈကမဥလ႕သုပ်ႈကြံဏအီၚတဖဥန႔ဥ ကဘဥတႈ ပ်ႈကြံဏ အီၚလီၚ. ဒီးဖဲဒဥ ပွၚအတႈကမဥလ႕ သုဟံးဃဏအီၚတဖဥန႔ဥယ ကဘဥတႈဟံးဃဏအီၚလီၚ. ' ဎိၚ ၂၀း၂၂-၂၃ န႔ဥဒီး ဒုးကဲထီဥ ဒုးအိဥထီဥတ့ႈတႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးတႈပနီႈစီဆွံန႔ဥလီၚ.
၆၅. ခီဖ်ိလ႕ တႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးတႈပနီဥစီဆွံန႕ဥဒီး ဒိးနႈဘဥအဘ်ဳးအဖွိဥမႏုၚန႔ဥလဲဥ?
(၂) တႈဒဲးဘးဖးဒိဥလ႕ အၾက႕းဒီး တႈစံဥညီဥလီၚထူလီၚဎိဏမ့ႈဂ့ၚယ တႈဒဲးဘးလ႕တႈပ်ႈကြံဏ၀ံၚ ဒီးတႈစံဥညီဥလ႕ကဘဥတႈလိးတူဏကြံဏတဖဥမ့ႈဂ့ၚ ပူၚဖ်ဲးကြံဏ၀ဲန႔ဥလီၚ.
(၃) ဒိးန႔ဥဘဥက့ၚကဒိးတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥတဖဥလ႕ အလီၚမႈကြံဏခီဖ်ိလ႕ တႈဒဲးဘးအဃိန႔ဥလီၚ.
၆၆. လ႕အကပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးန႔ဥ မ့ႈမတၚအစိကမီၚအိဥ၀ဲဒဥန႔ဥလဲဥ?
ထဲဒဥ ကစႈဎြၚတဂၚဧိၚ အစိကမီၚအိဥ၀ဲဒဥလ႕ အကပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥဒီး တႈဟ့ဥတ့ႈ တႈစိတႈကမီၚ၀ဲန႔ဥဆူ ကစႈဎြၚအခ႕ဥစးလ႕ အမ့ႈ၀ဲပွၚလုႈတႈအဒိဥသီခါတဖဥအအိဥန႔ဥလီၚ.
၆၇. လ႕အကဒိးန႔ႈ တႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘး တႈပနီဥစိဆွံၾက႕းၾက႕းဘဥဘဥအဂီႈန႔ဥ တႈမႏုၚလိဥ၀ဲဒဥ န႔ဥလဲဥ?
လ႕အကဒိးန႔ႈ တႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘး တႈပနီဥစိဆွံၾက႕းၾက႕းဘဥဘဥအဂီႈန႔ဥယ
(ခ) ပကဘဥအိဥဒီး တႈပီႈဎႈလီၚက့ၚပသးယ
(ဂ) ပကဘဥအ႕ဥလီၚအီလီၚလ႕ အကဟးဆွဲးတႈဒဲးဘးယ
(ဃ) ပကဘဥတဲဖ်ါထီဥတႈဒဲးဘးဆူ သီခါအအိဥယ
(င) ဒီးပကဘဥပဏလီၚပသးလ႕ ပကလိးတူဏကြံဏတႈဒဲးဘးအတႈစံဥညီဥယ တဖဥန႔ဥလီၚ.
၆၈. တႈစံးတႈလ႕ တႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသးန႔ဥ မ့ႈတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?
တႈစံးတႈလ႕ တႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသးန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥယ တႈသူဥကႈသးလီၚ သူဥအုးသးအုးဒ္ဥဒိဥကလဲဏလ႕ အကစႈဒဥ၀ဲအတႈဒဲးဘးတဖဥခဲလ႕ဏခဲဆ့အဃိန႔ဥလီၚ.
တႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသးလ႕ အလ႕အပွဲၚယ ဒီးတႈပိႈဎႈလီၚက့ၚသးလ႕ အတလ႕တပွဲၚယ အိဥ၀ဲဒဥ ခံကလုဏ န႔ဥလီၚ.
၇၀. တႈစံးတႈလ႕ တႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသးလ႕ အလ႕အပွဲၚန႔ဥမ့ႈတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?
တႈစံးတႈလ႕ တႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသးလ႕ အလ႕အပွဲၚန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥယ လ႕ပမၚကမဥဘဥကစႈဎြၚလ႕ အဂ့ၚကတ႕ႈအဒိဥကတ႕ႈအဃိယ ပသူဥကႈသးလီၚ သူဥအုးသးအုး၀ဲ နီႈနီႈန႔ဥလီၚ.
၇၁. ပကဒိးန႔ႈ တႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘး တႈပနီဥစီဆွံအဂီႈ အခြဲၚအယဏအဆ႕ကတီႈမ့ႈတအိဥ၀ဲဘဥန႔ဥ ပကဘဥမၚ တႈပီႈဎႈလီၚက့ၚသးမႏုၚန႔ဥလဲဥ?
ပကဒိးန႔ႈတႈပ်ႈကြံဏ တႈဒဲးဘးတႈပနီဥစိဆွံအဂီႈ အခြဲးအဎဏအဆ႕ကတီႈမ့ႈတအိဥ၀ဲဘဥန႔ဥယ ပကဘဥအိဥဒိး တႈဎႈလီၚက့ၚသးအလ႕အပွဲၚလ႕ အပ်ႈကြံဏပတႈဒဲးဘးသ့၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.
၇၂. လ႕ပကမၚ တႈပီၚဎႈလီၚက့ၚသးအဂီႈ ပကဘဥဆိကမိဥဆိကမးတႈမႏုၚတဖဥန႔ဥလဲဥ?
လ႕ပကမၚတႈပီႈဎၚလီၚက့ၚသးအဂီႈ ပကဘဥဆိကမိဥဆိကမး၀ဲလ႕ ပမၚကမဥဘဥကစႈဎြၚလ႕ အဂ့ၚ ကတ႕ႈ အဒိဥကတ႕ႈယ ခီဖ်ိလ႕ပမၚတႈကမဥအဃိ ပပဏထီဥကဒီးဎြၚအဖိခြါလ႕ထူဥစူညါအလိၚယ မူခိဥဘီမုႈ အတႈန႔ႈသါလီၚမႈကြံဏ၀ဲဒဥယ ပကဒိးန႔ႈဘဥလရဏအတႈစံဥညီဥလီၚထူလီၚဎိဏလ႕ခံတစိၚယ သ့ဥတဖဥ န႔ဥလီၚ.
၇၃. ဒ္သိးပကဒိးန႕ႈတႈပ်ႈကြံဏ တႈဒဲးဘးအဂီႈန႔ဥ ပကဘဥပဏလီၚပသးဒ္လဲဥ?
ဒ္သိးပကဒိးန႔ႈဘဥတႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးအဂီႈန႔ဥ ပကဘဥပဏလီၚပသးဂ႕ႈဂ႕ႈက်႕ၚက်႕ၚယ လ႕ပကဟးဆွဲး ထဲဒဥ တႈဒဲးဘးတကးဒံးဘဥ ပကဟးဆွဲးစ့ႈကိးက်ဲလ႕ အကဆွ႕ပွၚဆူ တႈဒဲးဘးအအိဥယ ဒီးပကဒိကနဥ ပိဏထြဲကစႈဎြၚအတႈမၚလိဏသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.
၇၄. တႈစံးတႈလ႕ က်ဲလ႕ အကဆွ႕ပ်ၚဆူတႈဒဲးဘးအပူၚန႔ဥမ့ႈတႈမႏုၚန႔ဥလဲဥ?
တႈစံးတႈလ႕ က်ဲလ႕အကဆွ႕ပွၚဆးတႈဒဲးဘးအပူၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲပ်ၚကညီယ တႈဖိတႈလံၚတႈအပီးအလီယ ဒိးတႈလီႈတႈက်ဲလ႕အဆွ႕ပ်ၚဆူ တႈဒဲးဘးအပူၚတဖဥန႔ဥလီၚ.
၇၅. ပကဘဥဒိးန႔ႈတႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘး တႈပနီဥစီဆွံဖဲ ပသးအိဥပွဲၚနံဥအခါန႔ဥလဲဥ?
ပွၚလ႕အအိဥမူအိဥဂဲၚယ အသးတုၚလီၚလ႕ အနီၚဖးတႈဂ့ၚဒိးတႈအ႕သ့၀ဲဒဥကိးနီႈဂၚဒဲးကဘဥဒိးန႔ႈ တႈပ်ႈကြံဏ တႈဒဲးဘးတႈပနီဥစီဆွံန႔ဥလီၚ.
၇၆. ပကဘဥမၚတႈပ်ႈကြံဏ တႈဒဲးဘးတႈပနီဥစီဆွံ ဖဲလဲဥအခါန႔ဥလဲဥ?
ပမ့သ့ဥညါလီၚပသးလ႕ ပတႈဒဲးဘးအိဥ၀ဲဒဥန႔ဥယ ပမၚတႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးသ့၀ဲဒဥထီဘိန႔ဥလီၚ.
၇၇. ပွၚကဲးသလံးဘါဎြၚဖိလ႕ အတုၚဆူ တႈဒဲးဘးဖးဒိဥအပူၚ တဂၚတ႕ဥကဘဥမၚ၀ဲဒ္လဲဥခီလဲဥ?
ကဘဥအိသဒီး တႈပီႈယႈလီၚက့ၚအသးအလ႕အပွဲၚယ ဒီးကဘဥဒိးန႔ႈတႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးတႈပနီဥစီဆွံလ႕ အဆိအခ့်န႔ဥလီၚ.
၇၈. ပၾက႕းဒိးန႔ႈ တႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးဘးတႈပနီဥစီဆွံခဲအံၚခဲအံၚန႔ဥဧါ?
ပၾက႕းဒိးန႔ႈ တႈပ်ႈကြံဏ တႈဒဲးဘးတႈပနီဥစီဆွံ ခဲအံၚခဲအံၚန႔ဥလီၚ. အဂ့ႈဒ္အံၚ ပဒိးန႔ႈတႈပ်ႈကြံၚ တႈဒဲးဘးတႈပနီဥစီဆွံခဲအံၚခဲအံၚန႔ဥ ကဒုးအါထီဥန႔ႈက့ၚကဒီးပွၚတႈစီဆွံ တႈဘ်ဳးတႈဖွိဥဒိးကဒုး အါထီဥန႔ႈ ပွၚတႈဂ့ၚတႈ၀ါ ပါရမံန႔ဥလီၚ.
၇၉. ဖဲပဒိးန႔ႈ ကိဥဘူဥစီဆွံတဘ်ီလႈလႈန႔ဥယ ပလ်ဥပ်ႈတႈဒဲးဘးဧါ?
ပတႈဒဲးဘးဖးဒိဥမ့ႈတအိဥန႔ဥယ ပတလိဥပ်ႈတႈဒဲးဘးန႔ဥဘဥယ လ႕တႈဒဲးဘးဖိအဂီႈ ပပီႈဎႈလီၚက့ၚ ပသးယ ဒီးပဒိးန႔ႈကိဥဘူဥစီဆွံသ့၀ဲဒဥန႔ဥလီၚ.
၈၀. ဒ္သိးပကစံးဘဥတဲဘဥပွၚလုႈတႈအဒိဥသီခါလ႕ ပတႈဒဲးဘးခဲလ႕ဏခဲဆ့လ႕ အတအိသဒီး တႈပ်ံၚတႈဖုး တႈမဲဏဆွးဘဥအဂီႈန႔ဥယ တႈမႏုၚလိဥ၀ဲဒဥန႔ဥလဲဥ?
ဒ္သိးပစံးဘဥတဲဘဥပွၚလုႈတႈအဒိဥလ႕ ပတႈဒဲးဘးခဲလ႕ဏခဲဆ့ကသ့၀ဲအဂီႈန႔ဥယ ပကအိဥဒီး တႈစူႈ တႈနဏလ႕ပအိဥလ႕ ပပႈသးဘိလ႕အအဲဥကြံပွၚဒီး သ့ဥညါတႈခဲလ႕ဏဒီး လဲပွဲၚ၀ဲဒီးတႈသးကညီၚအမဲဏညါ န႔ဥလီၚ. တႈပဏခူသူဥတႈဒဲးဘးဖးဒိဥလ႕ တႈပ်ႈတႈဒဲးဘး တႈပနီဥစီဆွံအခါန႔ဥ ကဲထီဥတႈဒဲးဘးဖးဒိဥ လ႕ တႈမၚတရီတပါတႈစီတႈဆွံန႔ဥလီၚ. ပွၚလုႈတႈအဒိဥလ႕ အမ့ႈ၀ဲကစႈဎ့ဥရွူးခရံဏအခ႕ဥစးန႔ဥယ တႈပနီဥစိဆွံအတႈစ႕ဃဏအိဥ၀ဲဒဥလ႕ အသုတတဲဖ်ါထီဥပွၚဂၚ အတႈဒဲးဘးနီတဘ်ီဘဥန႔ဥလီၚ.
၈၁. ဖဲပပ်ႈတႈဒဲးဘးအခါ ပမ့ႈပဏခူသူဏတႈဒဲးဘးဖးဒိဥတမံၚမံၚန႔ဥကမၚအသးဒ္လဲဥ?
ဖဲပပ်ႈတႈဒဲးဘးအခါ ပမ့ႈပဏခူသူဏတႈဒဲးဘးဖးဒိဥတမံၚမံၚန႔ဥပတဒိးန႔ႈတႈဘ်ဳးတႈဖွိဥနီတမံၚန႔ဥဘဥယ တႈဒဲးဘးလ႕ပတဲလီၚက်ဲၚလီၚသ့ဥတဖဥအဂီႈ တႈပ်ႈကြံဏတန႔ႈဘဥအမဲဏညါယ မ့ႈအကဲထီဥ၀ဲဒဥလ႕ ပမၚကဒီး တႈဒဲးဘးဖးဒိဥတမံၚန႔ဥလီၚ.
၈၂. ဖဲပတခ်ဳးဒိးန႔ႈ တႈပ်ႈကြံဏတႈဒဲးအခါန႔ဥ ပကဘဥကတဲဏကတီၚပသးဒ္လဲဥ?
(၄) ပကဘဥပဏလီၚပသးလ႕ယ လ႕ခံလ႕လဏပတမၚတႈဒဲးဘးလ႕ၚဘဥန႔ဥလီၚ.
၈၃. ဖဲပစံးဘဥတဲဘဥပတႈဒဲးဘး၀ံၚန႔ဥယ ဘဥမႏုၚအဃိလ႕ပွၚလုႈတႈအဒိဥသီခါဟ့ဥပွၚ တႈဒဲးဘးအတႈ စံဥညီဥ န႔ဥလဲဥ?
ဒ္သိးကသႈဎြၚအတႈသးဒိဥကလီၚမႈကြံဏ၀ဲအဂီႈယ ဒီးဒ္သိးကလိးတူဥကြံဏ တႈဒဲးဘးအတႈစံဥညီဥ တစိႈတလီႈအဂီႈယ ပွၚလုႈတႈအဒိဥသီခါ ဟ့ဥပွၚ တႈဒဲးဘးအတႈစံဥညီဥန႔ဥလီၚ.
၈၅. ပ်ၚလုႈတႈအဒိဥသီခါလ႕ အပ်ႈကြံဏပတႈဒဲးဘးမ့ႈသးပ့ၚနီဥ၀ဲ လ႕အကဟ့ဥပွၚ တႈဒဲးဘးအတႈစံဥညီဥ အဂီႈန႔ဥ ပကဘဥမၚဒ္လဲဥ?
ပွၚလ႕အပ်ႈတႈဒဲးဘးကဘဥဒုးသ့ဥနီဥထီဥ ပွၚလုႈတႈအဒိဥသီခါန႔ဥလီၚ. ဒီးတႈဒဲးဘးအတႈစံဥညီဥလ႕ ပွၚလုႈတႈအဒိဥဟ့ဥ၀ဲ မ့ႈတသ့ဥညါယ တနႈဟူ၀ဲဘဥန႔ဥ ကဘဥသံကြႈက့ၚပွၚလုႈတႈအဒိဥန႔ဥလီၚ.
၁. ဎၚကိဏ ၅း၁၆
တဲလီၚက်ဲၚလီၚ သုတႈကမဥ သက္းသကိးယ ဒီးဘါထုကဖဥလိဏသုဂီႈ သကိးသကိးတက့ႈ.
၂. မးသဲ ၅း၂၄
အိဥဃူလိဏဒီး နဒီပုႈ၀ဲႈတက့ႈ တုၚႏုၚတစုဟဲစိဏနတႈမၚဘူဥတက့ႈ.
ဘဥမႏုၚလ႕ လါမ့ၚန႔ဥ တႈကိးအီၚလ႕ ဖဲနဏစီဆွံအလါလဲဥ? Part II
ဘဥမႏုၚလ႕ လါမ့ၚန႔ဥ တႈကိးအီၚလ႕ ဖဲနဏစီဆွံအလါလဲဥ? Part I
တႈဆဲးတႈလၚ အတႈလုႈဒိဥပွ႔ၚဒိဥန႔ဥ မ့ႈလ႕အရ့ဒိဥလ႕ ပကဘဥ ဟ့ဥနီၚလီၚအီၚဆူ တႈစူႈတႈနဏအအိဥန႔ဥ ပါပါစံး၀ဲ.